Ithebhulethi eneprojektha zonke kwinto enye kunye ne Android | I-Androidsis
DigiLife Isizisela umxholo omtsha wesixhobo kwaye kunjalo kunye Android Njengomdlali ophambili kwinkqubo yolawulo lwayo, yitafile ekwayiprojektha. Ulibale malunga nokukhangela iintambo kwaye kufuneka uphathe ilaptop kunye neprojektha xa kufuneka ubonise umsebenzi othile, uyila ngokuthe ngqo kwithebhulethi kwaye uyiveze kwakule fowuni inye.
Isephantsi kophuhliso kodwa inokuba nezicelo ezimbalwa ezisebenzayo. Ngokubhekiselele kubuchwephesha beempawu zobugcisa, bambalwa abaziwayo, isikrini esine-intshi eyi-intshi eyi-intshi ene-a Inkqubo ye-Samsung Cortex A8 kunye neprojektha yakho luhlobo lweVGA.
Mhlawumbi eyona nto ingakholelekiyo malunga nesi sigxina lixabiso laso, kulindeleke ukuba lishiye umzi-mveliso ngexabiso elingaphantsi kweedola ezingama-200 ezinokuthi zongeze ezinye izinto de lifike kumthengi kodwa kunokuba lixabiso elinomtsalane kolu hlobo yesixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Ithebhulethi eneprojektha zonke kwinto enye kunye ne-Android
Ezinye zezinto endizithanda kakhulu lixabiso leXD
Ndiyathemba ukubona oku kungekudala ukuze ndibone ukuba kuhamba njani
ptm. Ukuba iphuma nge-200 aka eMexico bayinika ngaphezulu kwe-8000